I-EA028 - I-OMG 130dB Alarm Yomuntu - I-LED Flashlight - Ukwenza kusebenze i-Rip Cord - I-OMG Solutions
I-EA028 - I-OMG 130dB Alarm Siqu - I-Flashlight ye-LED - Ukwenza kusebenze i-Rip Cord
LOUDER NENGAPHAMBILI: I-130dB i-alamu ephuthumayo / ye-Panic edonsa amandla kusuka ku-AAA amabhethri. Igijima kabili ngokuzwakalayo (ivolumu yangempela ye-130dB RMS) futhi kabili isikhathi eside (kuze kube ihora le-alamu isikhathi) kunama-alamu ajwayelekile
ISIKHULU ESIKHULULEKILE: Ama-alamu amaningi asebenzisa amabhethri wokubuka. Lona usebenzisa amabhethri e-AAA esindayo. Cishe unamabhethri ashintshiwe ahleli azungeze indlu yakho kwenye indawo. Amabhethri e-AAA ayimfihlo yalokhu kuzwakala kobuhlungu kwale alamu. Zizohlala ezinsukwini ezingama-365 ngaphambi kokuthi ucabange ukuzishintsha.
UKUSEBENZA KWE-RIP CORD: Donsela isibopho sesigqoko ngephini lokunamathiswa kwesitayela esihlanganisiwe kuze kufike ku-1 ihora lokumisa okuqhubekayo i-alamu
I-DEL FLASHLIGHT: I-flashlight ye-LED emhlophe emhlophe ye-LED yendawo ngokushesha yokukhanyisa. I-flashlight iyi-hogi yebhethri, kodwa isebenza ngezikhwama ezimfushane ozidingayo.
Iqukethe i-alamu ye-130dB. Edizayinelwe ukufakwa emaphaketheni angaphandle ekhwama noma esikhwameni, i-ea028 nayo ingathathwa ngesandla ngabagijimi. I-alamu ivaliwe ngokumane udonsa iphini, evimbela abahlaseli noma abahlaseli kodwa futhi nemisebenzi ukukunaka uma udinga ukunakekelwa kwezokwelapha noma usizo. Ukusebenzisa i-alamu yomuntu siqu kushintshisa isici sokumangala kusuka kumhlaseli kumuntu ongase abe yisisulu.
Nsuku zonke Phatha i-Alarm
I-ea028 ilungele ephaketheni elincane lamajini akho, iphakethe langaphandle lobhaka noma isikhwama semali, noma ukuphatha ngesandla. Ukuphatha i-alamu yomuntu siqu kuyisinyathelo sangamabomu sokuvikeleka komuntu siqu, futhi isenzo sokuthwala i-alamu uqobo sikhuphula ukuqapha kothwali endaweni yakhe. Ngokungafani neminye imikhiqizo yokuzivikela efana ne-Tasers, i-alamu yomuntu ayisoze yasetshenziswa ngokumelene nawe. Futhi njengoba kusemthethweni ukuphatha noma yikuphi, i-ea028 iyithuluzi lokuzivikela elifanele labantu banoma yimuphi unyaka, noma iliphi ikhono, nanoma ikuphi.
Ukukhanya Okuphuthumayo kwe-LED Ukukhanya Okusheshayo nge-Bulletin Lifetime
I-ea028 ihlanganisa nokukhanya okuncane kwe-LED, okusetshenziselwa inkinobho ehlukile / yokuvala, ukukhanyisa okusheshayo nokuncane kwendlela yokuhamba, ukuvala imoto yemoto, noma ezinye izimo eziphansi zokukhanya. I-bulb ye-LED yokukhanya izohlala isikhathi sokuphila futhi ngeke idingeke ishintshwe.
Amabhethri ejwayelekile e-AAA eza kuqala, kepha umsebenzisi angashintshwa. Zivaleleke endaweni egumbini lebhethri evaliwe nge-micro Philips screwdriver ukuze abantu ababi bangakwazi ukususa amabhethri. Lapho i-alamu yakho ifika, izoba nethebhu epulasitiki ecacile oyikhiphayo bese uyilahla ukuthola i-alamu kumodi yokulinda. Amabhethri azohlala unyaka wonke ngaphambi kokuthi ufune ukuwafaka esikhundleni sebhethri elisindayo le-AAA. Sebenzisa inkinobho ekhanyayo ukunikeza i-alamu yakho isheke lebhethri elisheshayo ngaphandle kokudonsa intambo yomdwebo.
Okuhle ukuhamba ebusuku kuhamba nge-campus noma endaweni yakini
Ama-alamu womuntu angenye yezingxenye ezikhula ngokushesha ezidayisa embonini yokuzivikela, ngoba isitha esibi kakhulu somhlaseli ukunakwa. Ama-alamu womuntu asemthethweni ukuphatha kuzo zonke izifunda ezingama-50 (ngisho nasezindizeni nasezikoleni!) Futhi ziyindlela ephephe kakhulu nephumelelayo yokuzivikela. Azidingi ukuqeqeshwa noma ikhono ukuze zisebenze, futhi zingasetshenziswa yinoma ngubani kungakhathalekile ubudala noma ikhono lomzimba. Amaphoyisa, Abaphenyi Bezokuphepha Nezokuphepha Bancoma ukusetshenziswa kwama-alamu okuphepha komuntu. Izisulu zivame ukuhlukumezeka kakhulu ukuthi zingamemeza zicele usizo ezimweni ezingazijwayele futhi eziyingozi, zikhulise ukuba sengozini kwazo. I-alamu ephakeme iphoselwe ukwethusa umhlaseli ngenkathi kushintshwa into yokumangala isuka kumhlaseli iye kwesisulu. Izigebengu azithandi ukudonsela ukunakwa, futhi kungenzeka zibaleke lapho zibona ukuthi i-alamu ayinakumiswa.
I-ea028 ihambelana ikakhulukazi ne-Young People, College Students, ama-Night Owls, Abasebenza Lone, Abagijimi, Abadala, Abahlengikazi / Abasebenzi Bokunakekelwa Komuntu, Abahlinzeki Bokuhambisa / Abahamba Ngendlela.
I-130dB iphakame kangakanani?
I-decibel (i-dB efushanisiwe) iyunithi esetshenziselwa ukukala ukuthi umsindo ukhulu kangakanani. Indlebe yomuntu izwela ngendlela eyisimanga. Izindlebe zakho zingezwa konke kusuka eminweni yakho ukuxubha kancane esikhunjeni sakho kuya enjinini enkulu yejet. Ngokuphathelene namandla, umsindo wenjini ye-jet unamandla aphindwe cishe izikhathi eziyizigidi eziyizigidi eziyinkulungwane ukwedlula umsindo omncane kunazo zonke izindlebe zakho ongawuzwa nje. Lowo umehluko omkhulu!
Esikalini se-decibel, umsindo ozwakalayo omncane kakhulu (eduze kokuthula okuphelele) ngu-0 dB. Umsindo onamandla okuphindwe kayishumi ngu-10 dB. Umsindo onamandla aphindwe ka-10 kunokusondela kuthule ngokuphelele ngu-100 dB. Umsindo onamandla aphindwe ka-20 1,000 kunokucishe kuthule ngokuphelele ngu-30 dB. Ngezansi kunohlu lwemisindo ejwayelekile namazinga we-decibel ayo, kanye namanye ama-alamu ethu okuqhathanisa. Ukulimala kokuzwa kungenzeka ku-140dB, futhi ivolumu efanelekile ye-alamu yomuntu yi-125dB - 135dB.
50 dB esiqandisini
Umshini wokuwasha we-50 - 75 dB
Ama-air conditioning angama-50 - 75
50 - 80 dB shaver kagesi
I-55 - 70 dB yomshini wokuwasha izitsha
60 - 85 dB umshini wokuhlanza
Isomisi sezinwele esingu-60 - 95 dB
Iwashi le-alamu lama-65 - 80
Izindlu zangasese ezishaywayo ezingama-75 - 85 dB
I-80 dB ucingo lokukhala
I-110 dB ingane ikhala
90 - 115 dB esitimeleni
95 - 110 dB isithuthuthu
I-110 dB symphony konsathi
110 dB uphondo lwemoto
110 -120 dB ikhonsathi yomculo
I-112 dB CD player ephezulu
I-117 dB football game (inkundla)
I-130 dB jackhammer, ukushayela amandla
I-130 dB Vigilant PPS8 Alarm
Ukulimala kwe-140 dB kwenzeka ekuboneni okuqhubekayo
Indiza ye-140 dB isusa
I-150 dB i-firecracker
157 dB ibhaluni pop
Izikhwama ze-162 dB (ezinyaweni ze-3)
Isibhamu se-163 dB
I-166 dB handgun
I-170 dB shotgun
3 x 3 x amasentimitha angu-3
Ukubuka okuphelele kwe-4610 Ukubuka kwe-2 Namuhla